Waa Guri weyn cusub oo dhex ka dhis ah, kuna yaalo xaafada Dabaqeynka ee Degmada Dharkeynley. waxaa ka dhisan Guriga 5 Qol, 3 Musqul, Kushiin iyo parking. Wuxuu haystaa Document Saxan. Cabirka Gurga waa 20x20M2. Qiimaha waa $147,000 iyo Heshiis.
Updated on February 19, 2018 at 3:46 am
Property ID: 4352
Beds: 6Baths: 3sqft: 2600